Sida Loo Helo Taageerayaasha Abuurista iyo Wadaagista Mawduuc Adiga | Martech Zone
Sida Loo Helo Taageerayaasha Abuurista iyo Wadaagista Mawduucyada Adiga
Monday, June 9, 2014 Axad, Juun 8, 2014 Douglas Karr
Waxaan kaliya wadaagnay sida LinkedIn waxay adeegsaneysay sheeko sheeko iyo sheekooyinka isticmaalaha si loo kordhiyo waa dadaalka suuqgeynta calaamadaha iyo kor u kaca muuqaalkan ka socda Neil Patel - Sida Loo Helo Taageerayaasha Abuurista iyo Wadaagista Mawduucyada Adiga. Macluumaadka 'infographic' wuxuu ku dhex socdaa faa'iidooyinka iyo caddaynta istaraatiijiyadaha isticmaale-curiyaha (UGC).
Kaliya maahan in waxyaabaha isticmaale-soo-saarey ay lacag kuu keydiyaan, laakiin waxay sidoo kale kuu soo saari doontaa dakhli. Inta badan ee aad mashquuliyayaashaada ku mashquuliso meheraddaada, kalsooni badan ayaad dhisi doontaa, waana sii ballaadhi doontaa gaadhistaadu. Waxaad sidoo kale arki doontaa faa'iidooyinka SEO. Si laguu tuso sida aad ula macaamili karto dadka ku soo booqda si ay u bilaabaan abuurista iyo wadaagista adiga, Quicksprout waxay diyaariyeen infographic sharraxaya nidaamka.
Bixi qalab oo ku baro taageerayaashaada sida wax loo qoro, loola wadaago sawirrada iyo fiidiyowga ka dibna shaqaaluhu waxay diiradda saari karaan daaweeynta, hagaajinta sheekada, iyo soo saarista waxyaabaha kor u qaadaya astaantaada! In kasta oo geeddi-socodku u baahan yahay dib-u-habeyn lagu sameeyo hannaanka suuq-geynta waxyaabahaaga, ugu dambeyntiina waxaa jira kayd (iyo waxyaabo badan oo la yaab leh) si loo adeegsado waxyaabaha isticmaalehaagu ka kooban yahay si hadalka loo gaadhsiiyo!
Tags: uGCwaxyaabaha ka kooban isticmaalesawirada isticmaaleisticmaale-soo saarefiidiyow adeegsade ah
LinkedIn Waxay Heshay Shakhsi sheekadiisa
Dhaqannada ugu Fiican ee Foomamka Cusboonaysiinta Boostada iyo Xaaladda